Halkee Si Arag xiiso Street Art In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Halkee Si Arag xiiso Street Art In Europe
farshaxanka Street waa nooc casriga ah ee ra'yi dhiibashada farshaxanka dhigaya magaalooyinka dheeraad ah oo qurux badan. A kabarta jidka wanaagsan sidoo kale loo Waxyoodo ahayn laga yaabaa in aad ka fekerto maaddo bulsho muhiim ah ama idin xusuusiyo shuqullada sayid classical.
Cities of Europe waxaa ka buuxa meelo weyn la tahay waddada iyo darbiga wax qarqinaya. Waxaad qaadan kartaa muddo dheer una Socon Suuqa xoog rijiyeeyay oo aan marnaba heli caajiso. Halkan qaar ka mid tahay wadada xiiso iyo meesha si aad u aragto in Europe:
Street Art ee London
London waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan kuwa maqsuud tahay waddada iyo isu fanaaniinta ah. Ka mid ah jidadka waxaad booqan kartaa si aad u hesho dose of art fantastic, Camden iyo Shoreditch taagan. Si kastaba ha ahaatee, Brick Lane iyo SouthBank waa si fiican u yaqaan meelaha, sidoo kale. weli, haddii aad raadineyso weeyna meesha ugu caansan, madaxa si Shoreditch.
Paris waxaa ka buuxa jidka tahay meelaha kulul, sida ay inta badan billawdaan jidadka oo dhan. Head u arrondissements 10aad iyo 11aad iyada oo kabsarta Saint-Maur. Waa ay ka buuxaan Shepard Fairey Wehbe madow iyo caddaan on darbiyada dhismayaasha, taas oo socod weyn ka dhigaysa. Tani 2km wadada dheer intersects la kabsarta Oberkampf, meel xiiso leh marka laga eego tahay waddo.
Berlin ee East Side Gallery waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican dunida, kuwa ku raaxaystaan ​​fanka magaalooyinka. magaalada laftiisa ayaa buux goobta tahay waddo, laga yaabee ugu fiican tusaale Kreuzberg iyo Mitte. Waxaa jira laba degmo oo la maro gudaha soo jiidasho iyo xubnihii tahay wadada halyeey. Madaxa ugu dambaysta bari ee degmada Kreuzberg si aad u ogaato waxaad tahay ugu fiican.
Rome ayaa wadada dhagax aqbalayaan tahay waddada, laakiin magaaladan u qurux badan waxa ay hadda ugu dambeyntii jidaynayey ka creatives tahay magaalooyinka si ay isu muujiyaan. Waxaa jira degmooyin dhowr a oo halkaas tahay wadada ayaa si tartiib tartiib ah ilaa lana siii. Si kastaba ha ahaatee, meesha ugu fiican in ay soo booqdaan laga yaabaa San Lorenzo, xaafad la badan oo darbiga firfircoon. Haddii aad booqanaya Rome raadinayso qaar ka mid tahay wadada u qurux badan, diiradda on Via Enotri, via Ausoni, Via dei Sardi iyo Via dei Sabelli.
Graffiti ee Frankfurt
Frankfurt waa magaalo ka mid ah ma ka fili karto si aad u hesho liiska a for enthusiast tahay waddada, sida waxa uu leeyahay sumcad dheeraad ah Sterling ah in a ganacsiga Magaalooyinka. Si kastaba ha ahaatee, mid ka doodi karaa in xitaa magaalooyinka sida in ay yihiin nugul isagoo ka hadal xoog tahay waddada, inta badan fallaago qiime sare nool. Frankfurt leedahay wax badan oo ka mid ah tahay waddada ku wareegsan tareenka iyo bartamaha magaalada. The Hall of Fame on Ratswegkreisel waa meel kale oo wanaagsan in ay soo booqdaan.
Amsterdam ee goobta tahay waddada waa wax xoog leh, iyo fanka magaalooyinka gaadhay soo bandhigaa museum. The meelaha ugu fiican ee Amsterdam waayo, waxaad tahay wadada waa Spuistraat ah, Wijdesteeg, iyo NDSM, oo ay ku jiraan goobaha bartamaha magaalada. Waxaad kaloo qaadan kartaa safar tahay wadada ka Amsterdam Central Station. Xaqiiqada ah in safar this jira kuu sheegayaa ku filan oo ku saabsan sida kuwa kibirka magaaladanu tahay farshaxanka wadada ay.
Copenhagen tahay magaalada weyn haddii aad rabto inaad aragto qaar ka mid ah midabo iyo hal abuur tahay wadada - xataa guryaha dadka! Christiania waa meesha aad ka heli doontaa shuqullada ugu fiican ee farshaxan magaalooyinka tayo leh, si loo hubiyo in aan si aad u seegi.
Haddii aad diyaar u tahay inay arkaan waxaad tahay ugu fiican ee wadada Europe leeyahay in ay bixiyaan tahay; oo magaalooyinka oo dhan kuwanu waa kuwa si fudud loo heli tareen. Jartaan tikidhka aad on waqti iyo diyaariyo in ay horana!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-street-art%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)